काठमाडौंकाे वन क्षेत्र तीव्रगतिमा घट्दै ! – Nidar News
काठमाडौंकाे वन क्षेत्र तीव्रगतिमा घट्दै !
Nidar News ३ आश्विन २०७६, शुक्रबार
शहरीकरणले काठमाडौं उपत्यकाको वनक्षेत्र घट्दै गएको छ । तीव्रगतिमा बनेका बस्तीहरु, पूर्वाधार निर्माणले वन विनाश बढाएको सरकारी आंकडाले प्रष्ट्याएको छ । देशभरको वन क्षेत्र बढेपनि काठमाडौं उपत्यकामा भने घट्दै गएको छ ।
हरियाली देखिने काठमाडौं उपत्यका ९० को दशकपछि उराठ लाग्दो बन्न थालेको हो । काठमाडौंका अग्ला पहाडबाट उपत्यका नियाल्दा कंक्रिटका भवनहरु मात्र देख्न सकिन्छ । हरियो वन इतिहास बन्दै गएको छ । सन् १९९० को सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा कूल भू–भागको ३९ दशमलव ६४ प्रतिशत वन क्षेत्रले अगोटेको थियो ।
सन् २०१६ को सर्वेक्षण अनुसार ४४ दशमलव ७४ प्रतिशत पुगेको छ । तथ्याङकले मुलुकभर वन क्षेत्र बढेको देखाएपनि काठमाडौं उपत्यका सहित शहरी क्षेत्रमा भने वन विनाश तीव्र गतिमा छ । काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाको वन क्षेत्र यस्तो छ ।
काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर यी तीन जिल्लाका डाँडामा रहेका वन र संरक्षित क्षेत्रमा मात्रै बाँकी रहेका छन् । तर, शहरी क्षेत्रमा रुखहरु कटान भएका छन् । वनक्षेत्र मासिनाले पारिस्थितक प्रणालीमा असर पर्नुको साथै भविष्यमा भयावह स्थिति आउन सक्ने वातावरण विद्को भनाइछ ।
हाल नेपालमा वन संरक्षणका लागि विभिन्न ऐन बनेका छन् ।
समय–समयमा सरकारी गैर सरकारी तथा व्यक्तिगत तर्फबाट वृक्षारोपण गरी रुखको संख्या बढाउने प्रयास गरिन्छ । तर, बिना कुनै योजना र कुन क्षेत्रमा कस्तो रुख रोप्नेबारे जानकारी नहुँदा यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । वनक्षेत्र जोगाउन तथा हरियाली बढाउन सबैक्षेत्रले एकीकृत रुपमा पहल गर्न विज्ञहरुले सुझाएका छन ।
भारत-पाकिस्तान युद्धविरामको युरोपेली संघद्धारा स्वागत
भारतमा गत २४ घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट २७५ जनाको मृत्यु
‘पाकिस्तानको कब्जामा रहेको कश्मीर’ का लागि नेहरु जिम्मेवार : भारतीय गृह मन्त्री शाह
डेंगु नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न शान्ति समाजको आग्रह !